Soomaalida Ottawa iyo Cunsurinimada uu Booliisku ku Hayo
Magaalada Ottawa oo ah magaala madaxda wadanka Kanada waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay Soomaalidu sida aadka ah u deganyihiin. Dhibaatooyinka ugu waaweeyn ee Soomaalida magaaladan haysta waxa ka midda dhibaatooyinka kaga yimaada booliiska magaalada. Dhawaan ayuu wargayska ugu wayn ee magaaladan ka soo baxaa waxa uu soo bandhigay qaar ka midda dhacdooyinka foosha xun ee uu boolisku ku hayo Soomaalida deggan Ottawa, si gaar ahna waxa uu wargaysku aad uga faalooday dhibaatooyinka uu booliisku u gaysto dhalinyarada Soomaaliyeed oo intooda badan loola dhaqmo si khilaafsan qaanuunka u yaala wadankan. Madaxda magaaladan oo ay ku jiraan kuwa booliisku waxa ay marar badan balan qaadaan in ay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinkaas laakiin markii muddo la joogaba waxa soo baxada dhacdo cusub oo ka midda dhibaatooyinkan uu booliisku u gaysto Soomaalida.
Dhacdadii ugu danbaysay
Muddo iminka laga joogo usbuuc ayay dhacday dhacdadii ugu danbaysay. Dhacdadan oo ahayd mid ay aad uga warameen badiba telifishanada iyo wargaysyada magaaladu wax ay cadaynaysaa cunsurinimada uu booliiska ku hayo Soomaalida. Waxa ay dhacdadu u dhacday sidatan: koox cadaan ah iyo koox madow ah oo Soomali u badan oo ay meheradahoodu (business) isu dhawyihiin ayaa isku af dhaafay arimo la xidhiidha gawaadhodooda(mid cadaan ah ayaa gaadhigiisa ku xidhay gaadhi uu lahaa inan Soomaaliyeed). Is af dhaafkan (oo aan keenin wax gacan ah) kadib qolo kastaba waxa ay ku noqodeen meheradoodii. Qolodii cadaanka ahayd waxa ay isla markiiba la hadleen booliiska oo ay u sheegeen in rag madow ah oo hub wataa ay soo weerareen. Booliisku meeshii ay dhibtu ka dhacday waxa ay islamarkiiba u soo direen boolis aad u hubaysan oo wata ilaa 10 gaadhi. Ragii cadaanka ahaa ee ay Soomalida is laayeen oo ay la socdaan booliiskii ayaa u yimid Soomaalidii. Ninkii watay booliisku isaga oo aan wax su’aala ah waydiin Soomaalidii ayaa waxa uu markiiba amar ku bixiyay in la katiinadeeyo inta madowga ah oo dhan. Dhamaanba Soomaalidii iyo madowgii kale oo dhan waa la xidhxidhay qaarkoodna booliisku dhaawac ayuuba gaadhsiiyay. Ka dibna waxa dhamaantoodaba loo taxaabay xaruunta dhexe ee booliiska magaalada halkaas oo ay ku xidhnaayeen habaynka intiisii badnaa. Markii la sii daayayna waxa la sii daayay iyaga oo aan wax danbiya lagu soo oogin.
Warkani markii uu ku soo baxay warbaahinta magaaladan waxa uu dhaliyay buuq iyo sawaxan badan. Dad badan oo ah dadka la shaqeeya Soomaalidu waxa ay warbaahinta magaaladan u sheegeen in dhacdooyinka noocani ay yihiin qaar maalin kastaba ku dhaca Soomaalida. Tusaale ahaan dhawr maalmood kadib iyadoo uu wali buuqani taaganyahay ayaa hadana waxa la soo sheegay in dhaliinyaro yaryar oo Soomaaliya oo qolo cadaan ahi soo ashkatayaysay sidoo kale la iska xidhxidhay iyada oo sababta ugu wayn ee loo qabtay ay tahay in cadaanka xaafada la deggani ay ka soo ashkatoodeen dhaqankooda.
Sidii caadadu ahayd, ka dib markii ay Soomaalidu la shireen madaxda magaalaada waxa uu ninka madaxda ka ah booliisku uu u sheegay warbaahinta iyo Soomaalidaba in ay dhacdadani waxa ka badali doonto sida uu booliisku ula dhaqmo Soomaalida, sidaas oo kale waxa uu sheegay in baadhid wayn lagu samyn doono sida uu ku dhacay arinkani. Sidaas ayay yidhaahdaan madaxda booliisku mar kasta oo dhibtan oo kale ay dhacdo laakiin halkaa kama qaadaaan!!.
Dhibaatadu waa mid meelwalba taal
TORONTO: Cajalad Vedio ah oo laga Duubay nin Booliis ah oo Feeraya Wiil Soomaaliyeed Guji....
Bal markan waynu eegi halka uu ku danbeeyo balanqaaadkaas madaxa booliisku, laakiin aragtidayda dhibtani ma aha mid ku kooban Soomaalida Ottawa iyo Kanada oo kaliya. Waa dhib haysata Soomaalida meel kasta oo ay joogaanba. Afrika, Eeshiya, Yurub iyo Ameerikaba intaba hadaad akhrido wararka Soomaalida dhulalkaas deggan waxa aad arkaysaa in dhibta iyo cunsurinimada lagu hayo Soomaalidu in aanay yarayn. Kala daadsanaanta Soomaalida iyo iyaga oo aan lahayn ururo xoogan oo u dagaalama xuquuqdoodu waxa ay keentay in meel kastaba lagu dulmiyo. Jaaliyadaha kale ee ka midda jaaliyadaha dibadaha deggani waxa ay leeyihiin cid u dooda xuquuqdooda marka ay dhibi ku timaado. Ugu yaraan waxa ay leeyihiin Safaarado u dooda xuquudooda dadkooda. Soomaalidu safaaradna ma haystaan sidoo kale urur xoog leh oo ay ku midaysanyihiin oo xuquuqdooda u dagaalamana ma laha. Arinkaas waxa uu sababay in meel kastaba la inagu ugaadhsado. Sidaa daraadeed waxa ay ila tahay in ay daruuro tahay in la helo ururo (ama urur) si khaas ah ugu dagaalama xuquuda Soomaalida qurbaha ku dhiban. Aragtidayda ururudaasi waa in ay ka madaxa banaanaadaan siyaasad Soomaalida waana in ay hawshoodu ku eekaataa u dagaalanka xuquuqda qofka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. Ma fududda hirgalinta arinkani laakiin waa sidda kaliya ee argtidayda jaaliyadaha dibada joogaa ay xuquuqdooda ku ilaashan karaan. Sidoo kale waxa aan soo jeedin lahaa in hogaanka jaaliyadaha Soomaalida ee dibadaha gacanta loo galiyo ama ugu yaraan laga qayb galiyo dhaliinyarada ku barbaaratay mujtamcaadkan kuwaas oo aad moodi in ay aad u fahansan yihiin waagaca mujtamaca aynu dhexdegenahay.
Ilaahay xaqqa ha ina waafajiyo!
QORAALADII HORE EE SICIID CALI